Újezdec, Pardubický kraj, Czechia
Inqugwala sinombuki zindwendwe onguMatěj
Ishedi yeeloja ezimbini, ekumda welali esemagqagaleni yase-Újezdec, yindawo yokubaleka kwizinto ezenzeka mihla le.
IINKCUKACHA EZICACISEKILEYO NGAMANYE AMAZWE-QINISEKISA UKUBA UBONA UMFANEKISO WAKHO 🙂
Idilesi ithi Ujezdec u Litomyšle č.p. 12, ungayifumana kwi-mapy.cz, i-google ayibonisi amanani achazayo. Unokuyishiya imoto kanye kwindawo esecaleni kwendlela, ukuze kudlule enye imoto ukuba kukho umntu oqhubayo apho.
Phambi nje kokufika ndizokubhalela ukuba uzifumane phi izitshixo. Kuya kubakho ezimbini. Enye isuka kwidokodo kwaye enye isuka kumnyango omdaka ecaleni komnyango weshedi. (Into oyibonayo kwi-hut yi-cottage, i-barn isengaphantsi kweemitha ezingama-20). Emva kwalo mnyango ngasekunene uya kufumana iinkuni zezitovu, amazembe kunye neziqhushumbisi, onokuzenza phambi kweshedi. Kukwakho nomgqomo wothuli kunye nebhekile yeplastiki kunye neglasi. Ngasekhohlo ngumnyango wegumbi lokuhlambela apho kukho indlu yangasese kunye namanzi okusela. Kufuneka ufudumeze amanzi ashushu okuhlamba kwi-brutar, ukuba uyafuna. Ngokuchasene nendawo yokuhlambela yindawo yokuhlala, i-oven kunye nefriji, ungasebenzisa yonke into njengoko kufuneka.
Kwidokodo uya kufumana ikhitshi encinci, izitya, isitovu kunye neketile. Iti kunye nekofu ziyafumaneka. Sebenzisa iincwadi, imidlalo yebhodi, imidlalo yememori nayo yonke enye into ukuzonwabisa njengoko kufuneka. Kukho ii-el. iidrowa - phantsi kwesitovu nasecaleni kwebhedi. Ukukhanya kulawulwa yi-remote control ephezu kwetafile. Ngaphantsi kweleta B - off / on - elula. Izibane zokufunda ezincinci zijikeleze ibhedi. Kwizihlangu max kwi mat, ke kuphela engenazihlangu. Uza kuza nayo yonke enye into ngokwakho.
Ukushisa kwidokodo ekuseni emva kokuvuka kuya kuxhomekeka ekubeni ulala kangakanani kwaye umisa kangakanani ukufudumeza kunye nexesha elingakanani lonyaka. Sinazo iiduvethi apho, kodwa ndingacebisa iikawusi ezishushu kunye nejezi.
Ngokuchasene neshedi ekwithambeka uya kufumana ibha yokuzenzela ibhiya apho abanye abantu balapha befika amaxesha ngamaxesha.Ucofa ibhiya kwaye uphose imali kwibhokisi yemali. Abathandi bebhiya-sebenzisa oku kwakhona :)
Xa uhamba, nceda ushiye i-booth kwindawo efanayo njengoko unokuvula.
Ihamba ngentsimbi ye-11.
Ukufika nangaliphi na ixesha emva kwentsimbi yesine.
Ukuba kukho nantoni na, bhala kwaye ubuze. Enkosi kwaye ukonwabele ukuhlala kwakho.
4.96 ·Izimvo eziyi-84
Awuyi kufumana i-wifi, i-pub, ivenkile, iposi, iofisi okanye isikhululo se-metro apha, kodwa kwindawo ekufutshane kukho i-Růžový palouček, i-Toulovcovy maštale, ii-quarries ezikhukula kunye nendalo entle. Ungaya eLitomyšl ekufutshane ukuze ufumane isiko kunye nekofu.
Umbuki zindwendwe ngu- Matěj
Ubukho bethu buqinisekisiwe ekufikeni, ngexesha lokuhlala sisefowunini iiyure ezingama-24 ngosuku.